Ukuthengwa kweMicrosoft-LinkedIn Ukuvula iiNkundla ezintsha zoLuntu
Ukuthengwa kweMicrosoft LinkedIn ekhutshwe ngabalawuli, ukuvula iindlela ezintsha zokungena kubantu abajikeleze ihlabathi
Kwakuyiinyanga ezintandathu ngaphambi, ngoJuni 13, ukuba baxelele ukuba iMicrosoft izakufumana i-LinkedIn. Phantse ke, bathi baceba ukulungisa iingxoxo phambi konyaka. Namhlanje, iKhomishani yaseYurophu yatshilo ukuba ikhulile ukukhusela. Ngoko ke, ngoku bafumana uninzi lwezibonelelo zokulawula ezilindelwe ukugqiba ukufumana, kwaye ilungiselelo liya kuvalwa kwiintsuku ezizayo.
Ukuvunyelwa kweBrussels kuthatha emva kokuphicothwa kocwaningci kunye nemvume e-United States, eMzantsi Afrika, eCanada, eBrazil naseMzantsi Afrika. Kuzo zonke iintlanga nakwezinye iindawo ezahlukeneyo, baye bafumana ithuba lokuphonononga ukuxuba kwabo kunye nolawulo karhulumente kunye nabalawuli kwiinkcukacha ezibanzi.
Njengengxenye yeemviwo zabo neKhomishoni yaseYurophu, baqulunqa imisebenzi embalwa ngokumalunga nenkxaso yeMicrosoft yeengcali zangaphandle ezide zolawulo lwezonxibelelwano ezingaqhelekanga. Ngokomzekelo, baxelele ukuba kule minyaka emihlanu elandelayo:
Baza kuqhubeka nokwenza iProgram ye-Add-in yenkqubo ifumaneke kwiinkcukacha zokusebenzisana zangaphandle. Iprogram ye-Add-in ixhobisa abaqulunqi ukuba baququzelele ukulawula kwabo kwi-Microsoft Outlook, i-Word, i-PowerPoint ne-Excel, banikezela abathengi imeko engcono yokusebenzisa i-Ofisi. Njengoko baqhubeka bephucula le nkqubo, ezi phuculo ziya kufumaneka kwiinkcukacha zokungena kwamanye amazwe.
Baza kuqhubeka bevula ixesha elivulekileyo kwiOfisi ye-Ofisi efikeleleke kwiingcali zangaphandle ezide zolawulo lwezonxibelelwano zonxibelelwano.
Baza kuqinisekisa ukuba abaphathi be-IT kunye nabaxhasi banokuthi badibanise ukuhlangana kwabo kwe-Office ngokukhetha ukuba ubonise kwi-UI iphrofayili ye-LinkedIn kunye nedatha yesenzo esingahle idibaniswe kamva.
Ngethuba lokuthi bawakhe i-LinkedIn okanye i-tile ye-Windows PC kwaye bafake kwi-Windows, baya kuvumela abakhiqizi beCC ukuba baqoke ukuba bangawazisa kwi-Windows PC yabo kwi-Economic Area, okanye kwi-EEA. Kwakhona, baya kuqinisekisa ukuba abathengi banokukhipha isicelo kunye netayilile kwithuba elikhoyo lokuba ba nqwenela. Bangekhe bangeke basebenzise iWindows ngokwabo ukuba baqhube abaxhasi ukuba bazise isicelo se-LinkedIn, nangona ukuba singakwazi ukufikelela kufumaneka kwiWindows Store kwaye siqhubeke ngeendlela ezahlukeneyo.
I-Microsoft LinkedIn Deal
Kwi-EEA abayi kungena kwiinkomfa kunye nabenzi be-PC ukulungiselela kwangaphambili ukusekwa kwesicelo se-LinkedIn yeWindows okanye i-tile eya kuxhasa i-LinkedIn kwi-elite premite kunye nale miqolo ibha ukusabalalisa umntu olwabileyo kumlawuli womnxibelelwano.
Baluxabisa ithuba lokuthetha ngezi zinto kunye nezicatshulwa ezahlukileyo kwiindlela ezicingayo kunye nemveliso kunye neKhomishini yaseYurophu.
Ngolu hlobo lwenkqubo emva kwethu, banokuhlanganisa imibutho emibini ebalulekileyo kwaye bagxininise kwimibandela enzulu kakhulu yento ezayo. Iziganeko zeenyanga ezintandathu ezedlulileyo azenzi nje eli thuba lorhwebo, kodwa kunokuba iimeko ezinzulu zoluntu ezinxulumene nazo, zibaluleke kakhulu.
NgoJuni, uSatanya Nadella kunye noJeff weiner, ii-CEO zeMicrosoft kunye ne-LinkedIn, babike umbono wabo wokubambisana nefu lokufunda elifanelekileyo elihamba phambili emhlabeni. Kwiintsuku ezilishumi kuphela emva kokuba bhengeze lo mxube, abavoti baseUnited Kingdom bavotele ukushiya i-European Union. Ngaphezu koko, malunga neenyanga ezintlanu emva koko, i-crusade yobuhlanga yomongameli e-United States yafumana isigqibo esithile. Ngamacala omabini ase-Atlantic, kuye kwabonakala kubonakala ngokucacileyo ukuba abaninzi abantu bafunda malunga nekhohlo kwaye abanako ukufumana inxaxheba ekuphuculweni kwezemali kunye nokuvuleka okwenziwe nguqoqosho lwezoqoqosho olukhulayo.
Nangona iiplani zezinto ezintsha ziyi-panacea yeengxaki zezimali zangoku, zithemba ukuba zinokuzibophezela. I-Microsoft kunye ne-LinkedIn kunye banethuba elikhulu kubantu abasebenzisayo kwi-intanethi ukudala nokufumana iziqinisekiso zokufunda ezintsha, ukuqonda nokufuna emva kwemisebenzi emitsha, kwaye bavuleleke ngakumbi kwaye banenzuzo xa besebenza kunye nabahlobo babo. Ukusebenzisana banokufezekisa ngakumbi ukuba bakhonze abo bafundiswe phambili, kunye nabantu abaninzi abafuna emva kokuhlangana okutsha, iziphumo kunye neemfundo ezichongiweyo ngokucwangciswa ngokobuchule ngoko kuthiwa ziziko lobuchule. Inqweno yabo kukuba benze inxaxheba yabo yokwenza umnyango ovulekileyo kubantu abangazange baphumelele ekuphuculweni kwemali.
Ngokuxutywa kweMicrosoft kunye ne-LinkedIn, banokufumana indlela eya kubafundi ngabanye kubandakanye iziphumo kwaye bajonge imisebenzi engcono. Ngokusebenzisa iMicrosoft Philanthropies, baya kuncedisa ngaphezu kwanoma yintoni enye inhlangano ukuba idlulisele iimpawu eziphambili ezikolweni. Ngomsebenzi wabo wokufikeleleka ongenakufikeleleka kunye ne-broadband ebanzi ephakamileyo "ii-Space Spaces" ezintsha, ziya kufaka ukufikelela kwebroadband kumaqela angama-rustic. Okongeziweyo, kunye ne-LinkedIn yeGluph Graph, kunye nolwazi lwayo malunga nokuphuhliswa komsebenzi osondeleyo kunye neemfuno ezifanelekileyo, kunethuba elongezelelweyo lokunceda oorhulumente basebenzise ulwazi olungcono kunye neendlela ezifanelekileyo zokufuna iinkqubo zokuphucula imali ukudibanisa nabantu abaneengcango ezivulekileyo.
Bayaqonda ngokukhawuleza ukuba akukho nhlangano enye inokuthi ikwazi ukuqonda ubunzima beengxaki zemali eziya kwihlabathi namhlanje. Mhlawumbi ngaphezu kwayo nayiphi na into, oorhulumente kufuneka baqhubeke bequlunqa kwiqela elibanzi lemfundo, ukulungiselela nokusebenza. Kwakhona, ngaphezu kwamacandelo abucala kunye avulekileyo, ngokubanzi kufuneka bahlangane kwaye benze ngesimo sokwabelana ngokusebenza.
Akukho ukusilela komsebenzi-okanye ithuba-phambi kwethu.
Emva kokugqiba iingxoxo ze-nitty zengxoxo kunye noorhulumente emhlabeni wonke malunga nethuba lokuhlanganisa iMicrosoft kunye ne-LinkedIn, banomdla wokuqalisa nokugxila ekwenzeni inxalenye yabo.